अध्यक्षका प्रत्यासी डा. पौडेलको पक्षमा अमेरिकामा उर्लियो जनलहर « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
अध्यक्षका प्रत्यासी डा. पौडेलको पक्षमा अमेरिकामा उर्लियो जनलहर
१६ चैत्र २०७१, सोमबार २१:४९ मा प्रकाशित
न्यूयोर्क । न्यूयोर्कको नेपाली गाउँका रुपमा चिनिने रिजउडमा एनआरएन अमेरिकाका प्रत्यासी डा. केशव पौडेललाई अगाडि बढ्ने उत्साहस्वरुप रिजउडवासीले लौरो उपहार दिएका छन् । नडगमगाई सामाजिक सेवाको पथमा अगाडि बढ्न डा. पौडेललाई रिजउडवासीले लौरो उपहार दिएका हुन् ।
आसन्न एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनका प्रत्यासी डा. पौडेल रेशमा अगाडि बढेको एक्लो घोडाझैं विनाप्रतिस्पर्धी अग्रपंक्तिमा छन् । आगामी मध्य अप्रिलमा तय गरिएको निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै गत २९ तारिख आइतबार न्यूयोर्कको नेपाली गाउँमा डा. पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा न्यूयोर्कलगायत भर्जिनिया, कनेक्टिकट, न्यूजर्सी मात्र होइन बोस्टनदेखि समेत सहभागीहरु उपस्थित थिए । ४ सयभन्दा बढी नेपालीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा रिजउड नेप्लिज सोसाइटीका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले डा. पौडेल एनआरएन अमेरिकाको निर्विकल्प अध्यक्ष रहेको जनाउँदै आफ्नो समर्थन भएको बताए । वर्तमान एनआरएन सहकोषाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले डा. पौडेलले निर्वाचनमा बाजी मार्ने कुनै शंकै नभएको बताए । उनले डा. पौडेललाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको प्रष्ट पारे ।
यसैगरी वर्तमान महासचिव तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार कृष्ण पोखरेलले पनि डा. पौडेललाई खुलेर समर्थन गरे । त्यस्तै उपाध्यक्षका उम्मेदवारद्वय बन्दना कोइराला र रविना थापा तथा सदस्यका उम्मेदवार मोहन ज्ञवाली, श्याम भण्डारीले पनि अध्यक्षमा डा. केशव पौडेललाई समर्थन गरे ।
कार्यक्रममा ज्याक्सन हाइटदेखि पुगेका एक सहभागी भन्दै थिए– ‘यस पटकको निर्विकल्प अध्यक्षको निर्विकल्प विजेता डा. पौडेल नै हुन् ।’ उनी भन्दै थिए– ‘आज रिजउडमा जम्मा भएका ४ सयका फौज रमाइलो हेर्न होइन, केशव पौडेलको पक्षमा उर्लेको जनलहर हो ।’
एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनको मिति तय हुनुभन्दा झण्डै ६ महिनाअगाडिदेखि अध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको पक्षमा उर्लिएको जनमत अहिले अमेरिकाव्यापी भएको छ । चिकित्सक पौडेल न्यूमेक्सिकोस्थित एक अस्पतालको डिपार्टमेन्ट चिफ हुन् भने नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।